Shenzhou-12 က အာကာသပင်မခန်းမှ ခွဲထွက် - Xinhua News Agency
တရုတ်အာကာသယာဉ်မှူးများဖြစ်သော နွဲ့ဟိုင်စိန့် (Nie Haisheng) ၊ လျိုပေါ်မင် (Liu Boming) နှင့် ထန်းဟုန်ပေါ (Tang Hongbo) တို့အား တင်ဆောင်ထားသော Shenzhou-12 အာကာသယာဉ်သည် စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက် (ပေကျင်းစံတော်ချိန်) နံနက် ၈:၅၆ နာရီက Tianhe အာကာသစခန်း ပင်မခန်းမှ ခွဲထွက်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။၎င်း အာကာသယာဉ်မှူး ၃ ဦးသည် ပင်မခန်းတွင် ရက်ပေါင်း ၉၀ ကြာ နေထိုင်ကာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး တရုတ် အာကာသယာဉ်မှူးများအနက် အာကာသတွင် အရှည်ကြာဆုံးနေထိုင်ခြင်းလည်း ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ လူလိုက်ပါသောအာကာသအေဂျင်စီ (CMSA) အရ သိရသည်။
အာကာသယာဉ်မခွဲထွက်မီ အာကာသယာဉ်မှူးများသည် မြေပြင်ရှိ သိပ္ပံ-နည်းပညာဝန်ထမ်းများမှ ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် ပင်မခန်းနှင့် Tianzhou-2 ကုန်တင်အာကာသယာဉ် ပေါင်းစပ်ခြင်းအခြေအနေ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သုတေသန အချက်အလက်များအား အမျိုးအစားခွဲခြင်းနှင့် ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်ခြင်း (downloading) နှင့် ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းတွင် ထိန်းသိမ်းထားသော အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်းခြင်း စသည့် မြောက်များစွာသော လုပ်ငန်းများ ပြီးစီးခဲ့သည်။
အဆိုပါ တရုတ် အာကာသယာဉ်မှူး ၃ ဦးကို Shenzhou-12 အာကာသယာဉ်နှင့်အတူ အာကာသအတွင်းသို့ စေလွှတ်ခဲ့ပြီး ဇွန် ၁၇ ရက်တွင် Tianhe ပင်မခန်းသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း အာကာသဝတ်စုံဖြင့် အာကာသယာဉ်အပြင်ဘက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းကို နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Sept. 16 (Xinhua) — The spacecraft Shenzhou-12, which is carrying Chinese astronauts Nie Haisheng, Liu Boming and Tang Hongbo, separated from the space station core module Tianhe at 8:56 a.m. Thursday (Beijing Time).
The three Chinese astronauts were sent into space onboard the Shenzhou-12 spaceship and entered Tianhe on June 17. The crew carried out extravehicular activities twice over the past 90 days. Enditem
Photo : Screen image captured at Beijing Aerospace Control Center in Beijing, capital of China, June 17, 2021 shows three Chinese astronauts onboard the Shenzhou-12 spaceship saluting after entering the space station core module Tianhe. (Xinhua/Jin Liwang)